Ukunakekelwa Kwabesilisa | Amadoda anesitayela (Ikhasi 3)
Izinhlobo ezinhle kakhulu zentshebe ngokwesimo sobuso
Imbuzi egcwele: yalabo abakhulisa intshebe futhi abazi ukuthi lokho kuzohambisana yini nobuhle babo, noma kulabo abathanda isitayela esiqaphele kakhudlwana, imbuzi ezungeze umlomo ihamba kahle ngazo zonke izinhlobo zobuso, ngaphandle kwalabo abanesilevu esivezwe kakhulu.
Le yindlela abesilisa abanezinwele ezinhle abathola ngayo ivolumu
Amadoda anezinwele ezinhle angathola ivolumu ethe xaxa futhi ayifihle ngamasu alula esiwachaza kule ndatshana.
Uma unezinwele ezinhle, into ebaluleke kakhulu ukufaka ivolumu ezinweleni zakho zizonke. Ukuze uzuze lo mphumela, inketho engcono kakhulu ukusika i-gradient noma i-layered cut.
I-Agua de toilette yinhle futhi ihlanjululwe futhi ivumelana kahle nesikhumba. Kunzima ukukhetha amakha noma i-eau de toilette, kungaba eyakho noma ukunikela ngayo njengesipho.
Yeka ukuthi amadoda anobuso obude kufanele azikame kanjani izinwele zawo
Sinikeza uchungechunge lwezeluleko zezinwele zamadoda anobuso obude ukufeza ubuso obunobunye, futhi ngenxa yalokho bukhanga ngokwengeziwe.
Izinwele ezi-Frizzy? Zama lawa macebiso ukuze ungonakalisi izinwele zakho
Izinwele ezi-Frizzy kunzima ukuzithambisa, kepha akunakwenzeka. Lapha sikutshela ukuthi yini amadoda angayenza ukufeza isitayela sezinwele osifunayo naphezu kwalokhu.
Amathiphu wentshebe elungiswe kahle
Kuyinto elula ukuqala ngokugeza intshebe. Kunezinhlobo ezahlukene ze-shampoo eziklanyelwe izintshebe. I-shampoo yakudala nayo ingahambisana nalokhu kwelashwa.
Uhlobo lwamahora ayi-8
Uhlobo lwamahora ayisishiyagalombili luyindlela yokudla elandelwa ngabantu abaningi futhi ephakamisa indlela yokudla ongadla kakhulu ngayo njengoba ufuna amahora ayi-8, bese uzila ukudla amahora angu-8 alandelayo.
Sikulethela ama-shampoos amahle kakhulu wokulwa nenkinga yamadoda ukuze ukwazi ukuyilwa ngempumelelo ngokugeza izinwele zakho njalo.
Amathiphu okususa amabala ansundu ebusweni ngokwemvelo
Amabala ansundu abangelwa ukushefa imvamisa amabi kakhulu angabonakala.
Lokho abesifazane abakucabangayo nge-fallatio
Inhlanzeko engabazisayo noma ubudlelwano obubekiwe: abesifazane abaningi abenqaba lo mkhuba baphila okuhlangenwe nakho okubashiye benambitheka kabi futhi abazimisele ukuqala kabusha.
Amakhambi emvelo angasebenza futhi abe nempilo. Amanye amathiphu afana nalawo esiwaphakamisayo namhlanje akuvumela ukuthi uphuce izinwele zakho, ngaphandle kokusebenzisa imikhiqizo yokufakelwa.
Ezinye izindawo zomzimba zibuthakathaka futhi ziyazwela kunezinye, futhi phakathi kwazo sithola amakhwapha aqhubeka ehlushwa yimiphumela yokujuluka, izidambisi, ukushiswa yilanga nokunye.
Sichaza ukuthi kufanele sizisete nini izinwele zamadoda nge-hairspray nokuthi sizenze nini sisebenzisa ijeli yezinwele.
Qeda unyaka ngezinwele ezinhle ngalezi ziphakamiso ezintathu zokugunda izinwele nezekhanda
nazi iziphakamiso ezintathu zokuthakwa kwekhanda ukuqala unyaka ngezinwele ezinhle.
I-Propolis yokulwa ne-alopecia
Ngokusho kwabaphenyi, ipropolis nayo izoba nezindawo zokulwa nokulahleka kwezinwele kubantu.
Kulo nyaka kube nemikhiqizo eminingi eye yanikela ekwenzeni amakha amadoda njengengxenye ...
I-Beardilizer, umanyolo ongakaze ubonwe wentshebe
Amanye amadoda ayakuzonda ukushefa. Abanye baphupha ngokuba nentshebe egcwele, kepha abayithandi inkinga yezinwele. Kuthiwani uma i-Beardilizer ingasiza?
Amathiphu okugwema ukulunywa yizipikili
Umkhuba omubi wokulunywa kwezipikili unezimbangela ezingokwengqondo. Ziluma izinzipho zazo lapho kunokulawulwa okungalungile kwemizwa ethile njengokwesaba, ukukhathazeka noma ukwesaba.
Ingabe unikeza ama-deodorants ukubaluleka okuwafanele?
Ngabe unika ama-deodorants ukubaluleka okuwafanele uma kukhulunywa ngezomnotho? Thola lapha.
Izinzuzo zensipho yesibabule
Insipho yesulfure ingenye yezinconywa kakhulu ngudermatologists ukulwa nezinduna nezinduna.
Ziyini izinzuzo zokulala unqunu?
Abanye bakhetha ukulala bembozwe kahle, abanye benengubo encane kanti abanye, bengenalutho. Iqiniso ngukuthi ngokusho kokumangala okujwayelekile, ukulala ngaphandle kwezingubo kunikeza izinzuzo eziningi: le nketho iyindlela ebhekwe kahle kunabo bonke.
Ukushefa ama-gel nokubaluleka kokuchazwa kwentshebe
Sikhulume ngokubaluleka kokuba intshebe yethu ichazwe kahle, kanye nomkhiqizo ofanele ukwenza kanjalo, ukushefa ama-gel.
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-15 yempumelelo, uHugo Boss ukwazile ukuchaza indoda yanamuhla ngokumemezela ukuthi uyi ...
Intshebe imfashini kakhulu kunakuqala futhi ukunakekelwa kwayo kuningi futhi kuhlukahlukene. Kepha, akukho okungcono ...
Amathiphu okudambisa ngokwemvelo isikhumba sakho ngemuva kokushefa
Lapho sigunda, isikhumba siyacasuka. Ukugwema umuzwa ovuthayo, ukulunywa, amanxeba nezinduna okungabonakala ngemuva kokushefa, kunezixazululo zemvelo.
Ngabe uya eholidini futhi usuvele ucabange ngalokho ongakufaka esikhwameni sakho sezinto zokugeza? Ukuze kungabikho lutho olukhohliwe, into elula ukwenza uhlu. Ake sibheke eminye yemikhiqizo ebalulekile ozoba nayo lapho usohambweni.
IGillette Body, ukushefa okuzungeza konke
Ukushefa akufanele kudelelwe ngoba abesifazane abayisishiyagalombili kwabayishumi abanandaba nomzimba obushelelezi ngaphandle kwezinwele. UGillette uthole izinzwa futhi wakwenza kwaba lula kwabesilisa: manje sebenensimbi yoMzimba yokugunda umzimba wabo wonke.
Ijeli yeshawa kanokusho yamadoda
Kunenqwaba yemikhiqizo yobuhle yamadoda. Amakha, imikhiqizo yokulungisa izinwele, okhilimu abayindilinga emnyama, ukunakekelwa kwangemva kokushefa ... Kukhona ngisho nama-gels eshawa okunethezeka enzelwe amadoda.
8 amakha akhethekile ale ntwasahlobo
Emasontweni ambalwa ngaphambi kokuba uSuku Lobaba lufike, kunamafemu amaningi asebenzisa ithuba lawo ...
Ubufakazi bukaGentleman: IBoss Bottled Unlimited
Okuvelayo ngephunga elisha likaHugo Boss. Yize, empeleni, amakha awamasha, kepha ingumbhalo okhawulelwe weBoss Bottled yakudala
Ukunakekelwa okungcono kakhulu okushefiwe kwabesilisa
Ukuze ungabi nesikhumba esiqinile, kunemikhiqizo eguquliwe efana nama-gel ngemuva kokugunda, okhilimu nama-lotion.
Imibono emi-5 yokunikeza lo Khisimusi
Kungakapheli nenyanga ngaphambi kokufika kukaKhisimusi obukade ulindelwe, kunabaningi bethu abafuna ...
Maphakathi nenyanga kaMovember, funda ukuthi ungalungisa kanjani futhi unakekele amadevu akho
Inyanga kaNovemba yinyanga yamadevu wobumbano. Kulokhu okuthunyelwe sikunikeza amathiphu ambalwa awusizo wokukulungisa nokukugcina kahle.
Amaqhinga angama-20 okushefa okuphelele
Ukushefa okuphelele, leli gama elizwakala kabusha emakhanda ethu futhi esingathanda ukuthi ligcwaliseke njalo. Izikhathi eziningi…
Insingo kagesi noma izinsingo?
Ngaso sonke lesi sikhathi sikhulume nawe ukuthi yisiphi isikhathi esihle sokugunda, nokuthi yini okushefa ...
I-Invictus, okungaphezu kwephunga, indlela yokuphila
Lesi Sekwindla, uPaco Rabanne ubuyela ngokumangala ngephunga, indalo yakhe yakamuva, i-Invictus, iphunga elikhethekile elihloselwe wonke umuntu ...
I-Aguas Frescas yaseColonia izokunikeza impilo
Okuvamile futhi okupholile. I-Eau de cologne ayisoze yathatha indawo yamakha kodwa, njengakho konke empilweni, inokwayo.
I-Invictus, iphunga elisha nguPaco Rabanne
Kade ngigcina enye yezimfihlo ezinhle kakhulu zikaPaco Rabanne isikhathi esithile. Ukwethulwa kwephunga elisha ...
Ungayigcina kanjani intshebe yakho yezinsuku ezintathu iphelele
Usuvele uthathe isinqumo, futhi ufuna ukubheka intshebe yezinsuku ezintathu, kepha kunokuthile okukhathazayo. Njenge…
Ijeli noma igwebu lokushefa, ikuphi okufanele ukhethe?
Ngokuya ngohlobo lwesikhumba sakho nezinwele zobuso, ukushefa igwebu kungaba ngcono kuwe kunejel, noma okuphambene nalokho. Lapha sethula izici zayo eziyinhloko.
Okufanele ukwenze ukugwema ukuba nempandla
I-Alopecia noma lokho esikubiza nangokuthi impandla kungenye yokwesaba okuvame kakhulu kwamadoda, okuqala ...
Izinwele ezinde ziya ngokuya ziba njalo emadodeni, ngakho-ke ukwazi izindlela ezithile zokubopha izinwele ezinde kungasiza kakhulu kulezi zimo.
Intshebe ende ithanda ukulunywa lapho ikhula, kepha ukuze ukwazi ukugwema lokhu kucasula, nazi izeluleko zokunciphisa ukulunywa esilevini.
Izikhathi eziningi ukuthenga imikhiqizo yezimonyo kuyi-odyssey uma singenalo ulwazi oluyisisekelo sokwazi ukuthi hlobo luni ...
Yikuphi ukushefa okulungele isikhumba sakho?
Isinqumo sokuqala lapho ukhetha ukushefa, ingabe kuyisisekelo, i-razor manual noma i-razor kagesi? Iningi le…
Yikuphi ukunakekelwa engikudingayo ngohlobo lwesikhumba sami?
Indoda ngayinye inezidingo ezithile esikhumbeni futhi ngenxa yalesi sizathu idinga ukunakekelwa okuqondile ngokuya ngaleyo nkinga enayo ...
Izinduna ezingemuva kuyinkinga ejwayelekile kakhulu emadodeni, kepha ukuze ukwazi ukubukisa umhlane wakho ngaphandle kwamahloni ehlobo, nazi izeluleko zokuqeda le nkinga.
Singayibiza ngezindlela eziningi, ukukhipha, ukuqhuma, ukuxebuka, kepha ngaphandle kokungabaza kungenye yezinto eziyisisekelo zokunakekelwa ...
Ukubaluleka nezinzuzo zokusebenzisa isikhumba ebusweni
Kusobala ukuthi amadoda asinakekela ngokwengeziwe isithombe sethu nokuthi sikhathazekile ngokubukeka nokunakekelwa kwe ...
UZara Kwakhe amaphunga amadoda
IZara Kwakhe yakhiwa ngamakha amabili wamadoda ahlongozwa yinkampani ebiza izindleko ephansi iZara, kule sizini yasehlobo yasehlobo ka-2013.
Ungayisebenzisa kanjani i-contour yeso ngendlela efanele
Isimo se-contour yamehlo akho sisho okuningi ngomuntu ngamunye wethu, futhi lokhu kungenye ...
NgoLwesibili oluzayo, Mashi 19, usuku lukaBaba futhi awukamthengeli izipho? Ini…
I-HUGO Red, iphunga eleqa imingcele
Uma esikhashaneni esedlule, kwaTenerClase sasihlaba umxhwele ngokuphelele nge-Just Different, iphunga elaphula amasu, ngalokhu ...
Ama-shampoo angu-10 amahle kakhulu wokulwa nemisuka
Izinkinga zokudamba? Namuhla sikulethela kuMadoda anesitayela ama-shampoo ayishumi amahle kakhulu wokulwa nenkwethu ongawathola ezitolo
Amafutha omnqumo, into yokugcoba ephelele
Yize kunokhilimu abaningi abashefa emakethe, omunye wemikhiqizo emihle kakhulu esingayisebenzisa ukushefa uwoyela womnqumo.
Uma ufuna ukunakekela isikhumba sakho kuze kube seqophelweni eliphezulu, akukho okungcono kunama-gels shawa kaHugo Boss.
UMUNTU we-Halloween Ziqaphele, uzama i-Jesús del Pozo entsha
«Ubusuku bunephunga labo, uyabuzwa? Ingabe isikhumba sesibili, noma ingabe esokuqala? I-Apple Martini iyavela ...
Ukunakekelwa kwesikhumba: izinyathelo ezi-5 zesikhumba esifanele
Usinakekela kanjani isikhumba sakho? Namuhla maqondana nempelasonto, lapho sinesikhathi esithe xaxa sodwa, siyahamba ...
Impela iningi lenu likhathazekile ... Ngosuku olufana nanamuhla, niseshawa, nigeza ...
Njengoba kuvame ukwenzeka manje, kunamadoda amaningi azinakekelayo, yingakho sikhuluma ngemikhiqizo yobuhle beHomem.
Lapha sikhuluma nawe namuhla ngephunga elikhulu lesilisa elivela eVerace, lawo wonke amadoda.
Amalensi okuxhumana anemibala yabesilisa
Uma ufuna ukudonsela ukunaka ngaphezu kwakho konke, unganqikazi kuleli hlobo ukukhetha ukugqoka amalensi anemibala ngokubukeka okujulile.
Izinhlobo zentshebe ngokusho kobuso bakho
Uma ufuna ukubukeka uphelele ngaso sonke isikhathi, lapha sikhuluma ngezitayela zentshebe ezihamba phambili ngokuya ngohlobo lwakho lobuso.
Sikhuluma ngemikhiqizo emihle kakhulu yabesilisa ukuze ube nesikhumba nezinwele esimeni esifanele.
2 yemvelo ngemuva kokushefa kokunakekelwa kwesikhumba sakho
Uma uthanda ukugqoka ubuso bakho ngaphandle kwentshebe nsuku zonke akukho okunye ongakwenza ngaphandle kokugunda konke ...
Amabhande Wesilisa Spanx
Lapha unezingubo zangaphansi ezinhle kakhulu zokwakheka kwesibalo sakho kusuka kumkhiqizo wakwaSpanx.
Amathiphu wokuxhunywa kwamashiya wesilisa
Amashiya angaphezu kwesithiyo esivimbela umjuluko noma amanzi ukuthi afinyelele emehlweni ethu….
Amafutha Amadoda nguVictorio & Lucchino
Isifihla-buso esenziwe ekhaya sokunathisa izinyawo
Izinyawo ziyizikhohlwa zaphakade ekunakekelweni komzimba wethu. Sesijwayele ukufaka amanzi emzimbeni nasemzimbeni….
Ukube bekufanele ngichaze ukuthi yini iMax LS, bengizothi ukuphela kwezindlela zokwelashwa kweLab Series ...
Manicure yamadoda? Kunjalo!
Umhlaba wobuhle uvule ngokuphelele iminyango yawo emkhakheni wesilisa. Kuze kube kungekudala hhayi lowo ...
Makeup yamadoda: Monsieur kaJean Paul Gaultier
Enye yamafemu okuqala ukwethula umugqa wokwenza okukhethekile wabesilisa uJean Paul ovusa inkanuko ...
Ukunciphisa ama-gel esiswini
Sibonile muva nje ukuthi okhilimu besisu besilisa bandile, kepha bazosebenza ngempela njengoba besho? Ngabe bazoba njalo ...
Enye yezimaski ezilula ukwenziwa futhi ephumelela kakhulu imaski ye-aspirin. Ikakhulukazi ...
Lapha unephunga elimnandi le-Pacha, ngamakha amathathu ahlukile kunoma yiluphi uhlobo lomuntu.
Okunye kokukhathazeka okuhle kobuhle kwamadoda ukufihla imibuthano emnyama esabekayo. Ukungalali, ukukhathala ...
Izindlu zokugeza, amabhishi, ukusetshenziswa kwe-sarong, imfashini, i-sarong yesilisa
Kwabesilisa abaningi ukushefa kuyinto ejwayelekile yansuku zonke eba enye ye ...
Ngabe ukujuluka sekuyinkinga ongazi ukuthi ungabhekana kanjani nakho? Ukubona ukuthi sijulukile kuhlala kusenza singakhululeki, ...
Ubuso obaziwa njengoChris Martin, uKevin Bacon, u-Antonio Banderas, uTom Cruise noma uJavier Bardem, kwesinye isikhathi kwabo ...
Igundane Lezinwele, Ukunakekelwa Komuntu, Izitayela Zezinwele, Izinwele, Ukulungisa
Amamaki wokwelula owesilisa.
ama-stretch marks, i-aesthetics, Ukupheka okulula, ukunakekelwa komuntu siqu, ukudla,
Amasu amane wokuthuthukisa isikhumba sobuso
Ukunakekela isikhumba sobuso kuhle, nokwazi ezinye izimfihlo ezizokusiza wenze kanjalo. Indoda ngayinye inohlobo lwesikhumba ngakho-ke kufanele ivumelane nezimo.
Kujwayelekile kakhulu ukubona ukuthi abafana banamuhla banakekela izinwele zabo ngendlela efanayo, noma kwesinye isikhathi ...
Abesilisa baphinde badaye izinwele zabo
Yize inganekwane isho ukuthi ngabantu besifazane kuphela abadaya izinwele zabo, ngicabanga ukuthi kungaphezu kokusobala ukuthi abesilisa bayaqhubeka bevuma ukuthi nabo baya ngomgundi wezinwele ukuze badaye izinwele zabo. Kuyindlela enhle ukugcina usesikhathini.
Amakha angaphezulu kakhulu kwephunga.
Noma ngabe iyiphi indlela yakho yokususa izinwele, qaphela lawa macebiso alandelayo ukuze ukususwa kwezinwele kungabi ukuhlukunyezwa
Ambalwa kakhulu amadoda azinakekelayo izinwele zawo njengoba kufanele futhi alokothe ​​aguqule ukubukeka kwawo futhi ahlanganise izinwele zawo ...
Isichazamazwi Sabesilisa (M)
Ukufunda ukuzinakekela kahle, akukho okungcono kunokuqala ngezinto eziyisisekelo zezimonyo. Ngalesi sichazamazwi sezimonyo unga ...
Kule bhulogi sesivele sikwethule ngokusemthethweni endaweni engu- «T«. Ibunzi, ikhala nesilevu kwakha le ngxenye yobuso ...
Kuyini ukwenza mhlophe kwezitho zobulili?
Uke waqaphela ukuthi isikhumba esithweni sangasese simnyama? Yebo, uma ufuna ukuphelela ku ...
Impikiswano yaphakade phakathi kwensingo kagesi nensingo. Amadoda afuna indlela esheshayo futhi ...
Ungazisika kanjani izinwele zakho ukuze uzigqoke i-toupee?
Imfashini yokugqoka izinwele zesitayela sika-Elvis izoqhubeka kuyo yonke le sizini. Osaziwayo abaningi sebevele bayayifaka i-toupee ku ...
Ungakuthuthukisa kanjani ukubukeka kwezindebe zakho?
Akusizi ngalutho ukunakekela ubuso bakho ngokuphelele uma ukubukeka kwezindebe zakho kubi kakhulu. Kuvuliwe…
Emhlabeni wezimonyo, yonke into ngeke ibe sesigabeni esiphakeme njengeBiotherm Homme noma imikhiqizo "ejwayelekile" efana ...
Ukuhlola iphunga elimnandi esivivinyweni, isikhathi esihle sonyaka yihlobo, lapho nokushisa esikusebenzisayo, ...
Sayihlola, ulayini welanga kaGisèle Denis
Kufanele ngabe sesivele sinesikrini selanga esihle esikhwameni sethu sezindlu zangasese, noma nangaphezulu. Kepha uma ungenayo ...
Isikhumba esibucayi sokuthambisa: INivea vs L'Oreal
Uma kunemikhiqizo emibili wonke umuntu ayisebenzise esikhathini esithile empilweni yakhe, ngokungangabazeki yiNivea for Men ...
Amakhanda agundiwe, yebo noma cha?
Ihlobo lisondela ngokungenakuvinjelwa. Kuyashisa nsuku zonke (okungenani lapha eValencia) nenye ye ...
Ama-razor blades, kufanele uwaguqule kangaki?
Abaningi bethu bagunda besebenzisa izindwani, kepha uma singazigcini lezo zici zisesimweni esihle, bazolimaza ubuso bethu….
Ihlobo liyancipha. Saqala ukucabanga "ngokusebenza kwebikini". Sifuna ukubukeka sizacile, simnyama, ...
Iphuciwe, ngaphambi noma ngemuva?
Namanje namuhla, ngekhulu lama-XXI, kukhona labo abangacaci ukuthi sinini isikhathi esifanele sokugunda, ngaphambi noma ...
Uma kukhulunywa ngokukhuluma ngezinwele, sonke besinosuku lapho sizibuka esibukweni bese sithola ukuthi ...
Ukhunta lwe-Nail kuyinto engaba yinhle kakhulu futhi ingathandeki. Lesi sifo, esibizwa nge-onychomycosis, ungasithola ...
Amathiphu okusika intshebe yakho
Uma uthanda ukutshala intshebe, kufanele uhlale ucocekile futhi uzilungise kahle ukuze wenze okuhle ...
Isethi yokushefa ekhethekile kaGillette
Uma usacabanga ngohlu lwezipho zalo Khisimusi, namhlanje siphakamisa umbono omusha we ...
Amakha amahle kakhulu ngokusho kwePerfume Academy
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, iPerfume Academy ibibambe umqhudelwano eMadrid ukuletha imiklomelo evuza ...
Ugqoka kanjani uma umncane?
Akufani nokuba mncane, uqinile noma ukhuluphele, ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi iziphi izingubo ozozigqoka ngokwe ...
Amathiphu okushefa ngomshini kagesi
Ukushefa kuyinto amadoda okumele ayenze okungenani ama-3 ngesonto. Uma ufuna ukwazi ukuthi yini ...
Amathiphu wokuvimbela ukhunta wonyawo
Intwasahlobo ifikile futhi enye yezinkinga ezinkulu zamadoda ukuvela kwesikhunta ku ...
Angisoze ngenza ama-dreadlocks. Hhayi ngoba ngingabathandi, ngoba ngibathola bengakhululekile futhi ngoba angikwazi ukuphasa ...
Yini mascara ukukhetha?
I-Makeup ayiseyona into yomuntu wesifazane. Manje abesilisa nabo bagcoba izimonyo. Uma ukhethe lokhu ...
Izikhathi eziningi zabesilisa abaya endaweni yokucwala izinwele bangabonisa inkinga enkulu lapho bethatha isinqumo sokuthi ...
Akukho lutho olubi ukwedlula ukuqala ukubona ukuthi izinwele zakho ziya zincipha, kepha akufanele ungene ekuphelelweni yithemba. Uku…
Ukususwa kwezinwele kuya ngokuya kuba semfashinini. Amadoda amaningi akhethe eminyakeni yamuva nje ukuthi anamathele amasende abo ...
Ungayilungisa kanjani noma uyisuse kanjani imidwebo
Mhlawumbe abaningi balabo abake bathola i-tattoo abayekanga ukucabanga ukuthi kuyini ...
Amakha amasha amadoda nguCarolina Herrera
Inkampani yezemfashini uCarolina Herrera uzimisele ukunqoba imakethe yamakha yamadoda, nephunga layo elisha, ...
Ukushiswa eceleni. Izinhlobo.
Kwamanye amadoda, ukwakheka kwama-sideburns amahle kubalulekile ukukhiqiza isithombe osifunayo sobuso. Kimi,…
Ingabe ukufaka isigqoko kudala ukulahleka kwezinwele?
Amadoda amaningi, ngenxa yezimo ezahlukahlukene, ajwayele ukugqoka izigqoko ngokweqile, akhohlwe ukuthi ukusetshenziswa kwale ngubo njalo ...
UNacho Figueras, uPolo wenxusa lephunga likaRalph Lauren
Umdlali wepolo okhokhelwayo, uNacho Figueras uqokwe njengenxusa lamakha ePolo eWorld of Polo….
Elinye ihlobo lapho kubonakala sengathi isifuba esishefiwe sisesimfashini. Ngokusho kweVeet for Men, futhi ...
Emashumini eminyaka edlule intshebe yayihlotshaniswa nabesilisa abanokuthambekela kobungqingili. Ngabe lokho kwenzeka eminyakeni ...
I-Philips Nivea yaMadoda, i-shaver kagesi enesicelo se-lotion sokunakekelwa kwesikhumba ...
Izinwele esifubeni, yebo noma cha?
Abanye besilisa bafuna ukuba nezinwele zesifuba ukuze banake umlingani wabo, futhi kungahle kubonakale ...
IPantene Pro V eyengeziwe iqonde: Izinwele eziqondile ezingasilika
Kunezinhlobo eziningi zama-shampoo futhi ugeza okhilimu abathembisa ukulungisa izinwele zakho futhi bazishiye zilawulwe futhi zilula, kepha ...
Amasu okomisa izinwele
Amanye amadoda anenkinga yokungazi ukuthi zome kanjani izinwele zawo, mhlawumbe ngoba asikaze sifunde ukuthi singazenza kanjani noma ngoba ...
Usebenzisa kanjani ukhilimu ohlanzekile?
Ukugeza ukhilimu noma i-conditioner kungumkhiqizo wokunakekelwa kwezinwele ongasetshenziswa ku ...
Ukuphela kwento esihlose ngayo ukukunikeza uchungechunge lwezeluleko emadodeni akhuluphele ngokweqile, yize ukudla okuncane ...
Ukuthambekela ekubhekaneni nokuziphendukela kwemvelo kanye nokuthi amadoda aya ngokuya ekubona ukubukeka kwawo, ...
Ezikhathini eziningi sikhetha ukugeza ubuso bethu ngensipho namanzi, ukushefa bese siphuthuma sibheke ...
Yize kwesinye isikhathi ubasongele ngokuwadaya, abaningi bayamelana nentelezi yezinwele ezimpunga. Yize amanye amadoda ...
Okunye okukhathaza kakhulu ukuthi abesilisa abadlula iminyaka engama-25 bahlupheka ukuthi kube nempandla. Futhi yilokho ...
Imikhiqizo yezimonyo ukukhipha
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule sakhuluma ngokuqothulwa kwamadoda futhi, njengoba senza nge ...
Ungazihlanza kanjani izindlebe zakho?
Indlela ejwayelekile yokuhlanza izindlebe zakho nge-swabs swabs, noma lokhu kungakushiyela ezinye izinsalela noma ungazilimaza ...
Ngokwami, ngikholelwa ukuthi ama-AX deodorants enza umonakalo emakhwapheni nakubathengi bawo ngenxa yokuqukethwe kwawo okuqinile ...
Cishe awucabangi ngezinzipho zakho ngaphandle kokuthi uzipende ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka noma unyoko ...
Kuyindlela ebizwa ngokuthi isitayela sasekolishi noma ukubukeka kwangaphambili futhi kubonakala sengathi kungenye yezintandokazi zabaqambi abaningana lapho bethula amaqoqo abo futhi sekuvele kuyingxenye yomkhuba omusha.
Izici ze-Aloe Vera zesikhumba sowesilisa
Isitshalo se-Aloe Vera sidabuka e-Afrika futhi sinezinto eziningi, phakathi kwazo okukhona: ukuthambisa, ukwelapha nokulwa nokuvuvukala
Esihlokweni esandulele sendlela yokuthola ukushefa okuphelele sikhulume ngesiteji ngaphambi kokushefa, esikubiza ngokuthi ...
Ipheya elimnandi futhi elinikeza izinzuzo eziningana empilweni yamadoda.
Ama-tattoos ayewumkhuba wase-Eurasia ngezikhathi ze-Neolithic, aze atholakale nakwezinye izidumbu ezinomlando wasendulo ongafika ku-6.000 ...
Amathiphu okushefa okuphelele (I)
Ngaphakathi kwesimiso sethu sansuku zonke sifihla okungaziwa kakhulu sonke esicabanga ukuthi siyakwazi: ukushefa. Sizohamba…
Uma unenkinga yezinduna noma izinduna, akukho okungcono kunama-apula noma i-antioxidant ukugwema lezi zindawo ezicasulayo ...
Akuphoqelekile, kepha ukusebenzisa uwoyela omuhle wangaphambi kokushefa kungaphezu kokunconywa uma uhlupheka lapho ushefa, noma ...
Kuthathwe ngokusobala. Sivele sinezaba zokungayishebi leyonshebe yezinsuku ezintathu eyadala umonakalo omkhulu kudala….
Amaqhinga wezinwele zentshebe ezingafakwanga
Ngemuva kokushefa, kuvela izinduna ezicasulayo. Izikhathi eziningi, ngemuva kokushefa okuseduze, ichopho lezinwele ...
Izinhlobo Ezihlukahlukene Zamakha
Amakha ayingxube equkethe amafutha abalulekile anephunga, utshwala kanye ne-fixative, esetshenziselwa ukuhlinzeka okumnandi futhi ...
Dior Homme Ezemidlalo
Dior Homme Ezemidlalo. "Kuyiphunga elisha futhi elinomfutho", elenzelwe kuphela abesilisa abagqoka amajini esikhundleni salokho ...
Ungayisebenzisa kanjani i-gel yezinwele?
Ijeli ngumkhiqizo osetshenziswa amadoda amaningi lapho elolonga izinwele zawo. Ingasetshenziswa zombili ...
Ungasivikela kanjani isikhumba emakhazeni
Ngokubanda, ubuso yingxenye yomzimba evezwe kakhulu ezintweni ezifana nomoya, amazinga okushisa aphansi, ...
Induna, ungayivimba kanjani?
Izinduna zibonakala ngokuba khona kwezinduna, ama-whiteheads abizwa ngama-pustules nezinye izilonda ezifana nama-papules, ama-nodules, ...
Ukukhula kwentshebe kancane
Inkampani yezimonyo iClinique yathuthukisa ulayini wemikhiqizo eyenzelwe isikhumba sabesilisa ngokukhethekile. Lokhu kuhumusha kube izimonyo ...
I-Blue Seduction, amakha abakhohlisi abazelwe
Ukubuka okubukhali, ukumamatheka kokwazi, ukungqubuzana "okungenhloso"; izinsizakusebenza ebezisebenza ngesikhathi sokuba yingxenye ...
Ngabe amadoda afuna ikhala elincane?
Ikhala lowesilisa liphethe izinganekwane. Kuthiwa lapho ikhala iba nkulu, iba nkulu ...
Amakha azo zonke izinhlobo zamadoda
Ukukhetha amakha esizowasebenzisa akuyona indaba encane. Ngakolunye uhlangothi, yize kungukukhetha ...
Sonke siyazi ukuthi zingagezwa kanjani izinwele zethu: ezimanzi, intambo kanye nokugeza. Kepha kukhona amanye amaqhinga ongafunda ukugcina i ...
Kokuthunyelwe okulandelayo ngizobhala ngamathuluzi namasu adingekayo ukushefa njengomnumzane. EMpumalanga…
Yize kungadingekile, ukhilimu noma uwoyela owandulela ukushefa unconywa kakhulu njengengxenye yesimiso sansuku zonke ...